Ndifuna ukukhuphela iividiyo kwi-instagram. Kodwa andazi ukuba ndenze njani. Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 261
I-Instagram ngoku yenye yeefayile ze- uninzi lwenethiwekhi ezisetyenziswayo kwihlabathi liphela, iye yathandwa kangangokuba abadali bayo bakubone kufanelekile ukongeza imisebenzi engakumbi kuyo yonke imihla, ukuze kugcinwe isikhundla sayo phakathi kweentandokazi zabasebenzisi benethiwekhi yoluntu.
Enye ye imisebenzi endiyithanda kakhulu kukukwazi ukulayisha iividiyo eqongeni ngendlela elula kwaye ke ubenakho ukubonisa abalandeli be-akhawunti ngendlela ecace ngakumbi nangoko into eyenziwa ngumlawuli okanye ayenziyo. Olu lukwayinto entle yokuthengisa kwabo bafuna ukukhuthaza iinkonzo kunye neemveliso zabo ngokukuko.
Ndizikhuphela njani iividiyo:
Iqonga le-Instagram aliboneleli ngenketho evumela abasebenzisi ukuba bakhuphele iividiyo ngokuthe ngqo kwisicelo. Kule meko ukuba ufuna ukukhuphela ividiyo kufuneka sebenzisa enye yezicelo ezininzi Okwangoku ikhona kwimarike yoku. Iindlela zokusetyenziswa ngokufanayo ziyafana kwezi zicelo zokukhuphela, kuphela zizibonelelo abazibonelelayo ziyahluka.
Usebenzisa njani iiapps zokukhuphela:
Apha siza kukubonisa indlela yokusebenzisa ezimbalwa kubo. Njengoko besibonisile ngaphambili, ukusetyenziswa kuyafana phantse kuzo zonke. Into yokuqala ekufuneka uyazi yindlela yokukopa ikhonkco okanye i-URL yokuyisebenzisa, njengoko sele sibonisile, esi sisiseko sokusetyenziswa kwezicelo zokukhuphela.
Uno. Ngena kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngendlela eqhelekileyo.
Ezimbini. Khetha ividiyo ofuna ukuyikhuphela kwaye uyigcine.
Ezintathu. Cinezela loo nto ngamachaphaza amathathu (· · Saka), afunyenwe kwiscreen sesicelo kwikona ephezulu ngasekunene.
Zine. Oku kuyakubonisa ukhetho oluninzi, khetha icandelo elikuvumela ukuba ukope ikhonkco.
Cinco. Nje ukuba ikhonkco likhethwe, kuya kufuneka uvule usetyenziso oluthandayo kwaye ulincamathisele apho lubonisa khona kwaye ucofe ukhetho lokukhuphela. Oku kusebenza kuzo zonke iinkqubo zokukhuphela, ngokwahluka maxa wambi.
Le yenye ye izicelo ezipheleleyo zokukhuphela. Awunakukhuphela kuphela iividiyo ezibekwe ezindongeni, kodwa kunye nezo zisasazwa kwi-IGTV. Enye yeenguqu zalesi sicelo kukuba kufuneka ukhethe umgangatho ofuna ukukhuphela ividiyo kuwo, ikunika iindlela ezininzi onokukhetha kuzo: 720p, 1080p, 4K kunye ne8K Phakathi kwezinye iindlela zokukhuphela onazo ukuba uyifuna kwi-MP3 okanye kwi-MP4.
Olu khetho lolunye lwezona zithandwa kakhulu njengoko kungekho mfuneko yokukhuphela iinkqubo ezongezelelweyo ukuze usebenze. Kulula ukuyisebenzisaKuya kufuneka usebenzise kuphela amanyathelo esiwabonisile ngaphambili. Ikwavumela ukuba ukhuphele iifoto zeprofayili, simahla.
Awunakusebenzisa esi sixhobo kwiKhompyuter yakho kuphela, unokukhuphelo sikwisixhobo sakho esiphathwayo, ukusebenza kwayo kusisiseko, kuya kufuneka ulandele imiyalelo ebonisiweyo, kunye neevidiyo Uya kuba nenketho yokukhuphela iifoto, IGTV kwaye ukhuphelo luya kugcinwa ngqo kwikhompyuter yakho.
1 Ndizikhuphela njani iividiyo:
2 Usebenzisa njani iiapps zokukhuphela:
3 Usebenzisa njani iiapps zokukhuphela:
4 Izicelo ezahlukeneyo: